Perricone MD dia manitatra ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Perricone MD dia manitatra ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection
Perricone MD, marika mamoaka vahaolana amin'ny hoditra, tohanan'ny siansa, dia namoaka ny fanampiny farany amin'ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection miaraka amin'ny Ultra-Smooth Clean Shave Cream.
Tsy manam-paharoa amin'ny fanangonana, ny vokatra rehetra dia misy Cannabidiol (CBD) tsy misy fangarony 99%, naterina tany Etazonia, ho toy ny mpiorina manan-danja. Ny CBD, fantatra amin'ny tombony mampitony, dia manampy amin'ny famelomana sy fampitoniana ny hoditra tena misy olana sy voan'ny saina.
Ny Ultra-Smooth Clean Shave Cream dia manasongadina endrika manankarena be izay mamorona faritra malama ho an'ny volom-bolo tena ahazoana aina sy madio. Ny Cannabidiol dia miasa tsy misy fangarony amin'ny menaka voa sativa sy allantoin handrendrika sy hanalefaka ny hoditra amin'ny alàlan'ny famelomana ny hoditra ho an'ny hoditra avela ho malefaka sy malefaka miaraka amin'ny tendron'ny mikitroka, mikitroka ary mikraoba kely. Ity raikipohy tsy misy sulfate ity dia non-comedogenic, vegan, dermatologist-notsapaina ary eken'ny National Psoriasis Foundation sy ny tontolon'ny manampahaizana manokana.
Amin'ny faran'ny 2021, Perricone MD dia hanitatra bebe kokoa ny famoriam-bola amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Ultra-Lightweight Calming SPF 35 Veil. Miaro ny hoditra amin'ny taratra UVA sy UVB izay mampidi-doza ity tabilao miorina amin'ny mineraly ity rehefa mampitony sy mampitony ny hoditra.
"Miaraka amin'ny fanombohana ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection amin'ny taona 2020, dia manohy ny laharana voalohany amin'ny fanavaozana ny CBD izahay hatramin'ny nanombohanay voalohany ny mpiorina tamin'ny taona 2017." hoy i Robert Koerner, Lehiben'ny Marketing ao Perricone MD. "Miaraka amin'ny fitomboan'ny tsenan'ny fikolokoloana ny hoditra CBD amin'ny hafainganam-pandeha haingana dia faly izahay mitondra ireto fanomezana roa ireto ho an'ny sokajy, sady mitazona ny fanoloran-tenan'ny marika ho madio sy malemy paika ary mahomby avokoa ny paika rehetra ao anatin'ity franchise ity."
Ny manontolo Perricone MD Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection dia ekena ary neken'ny National Psoriasis Foundation. Miaraka amin'ity fanampiana ity, ny andiany feno an'ny Perricone MD Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Collection dia eken'ny National Psoriasis Foundation. "Ny Tombo-kazo momba ny fankasitrahana nasionaly Psoriasis dia mamantatra ireo vokatra noforonina na natao tsy hampahasosotra sy tsy hampidi-doza ho an'ireo olona miaina miaraka amin'ny aretin'ny psoriatika sy psoriatika," hoy i Randy Beranek, filoha sy tale jeneralin'ny National Psoriasis Foundation. "Faly izahay fa farany hanana crème shave izay ekena ao amin'ny Directory Seal Product Directory."
Miteny ho azy ny valiny. Tamin'ny fanandramana nataon'ny mpanjifa, 97% amin'ireo mpisedra no nilaza fa tsy mahasosotra * izany, 94% no nilaza fa misoroka ny fandoroana hareza, ny mikitroka ary ny fanapahana micro *, ary ny 92% dia nilaza fa mamela ny fiharatra * akaiky sy mahazo aina *.
* Miorina amin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa 196 lahy sy vavy aorian'ny 1 andro